IiHacks zeQela 🥇 Ukukopa, iAimbot, i-ESP, iWallhack- iGamepron
Dlala iQela ngendlela obusoloko ufuna ngayo! Fumana ukufikelela kwi-Squad Aimbot ekhokelayo, iWallhack, i-ESP, nokunye okuninzi apha eGamepron. My indlela eyiyo ngezixhobo zethu!
Sele uyithengile i-Squad Hack? Fumana amanyathelo alandelayo apha
Nceda uqaphele: Phambi kokuba uthenge iiqela lethu leQela, qiniseka ukuba isixhobo osikhangelayo ukuba usithenge sihlaziyiwe kutshanje okanye sisekwi-intanethi. Ngelixa sihlala sihlaziya izixhobo zethu, kukho ukulibaziseka ngexesha lokuhambisa kwezinye iimeko; Ngelixa ihlala ikhawuleza, inokuthatha iiyure ezimbalwa. Zonke izixhobo zethu zitshixiwe nge-HWID, oko kuthetha ukuba ungazisebenzisa kwikhompyuter enye-qiniseka ukuba ikhompyuter yakho iyahambelana nazo zonke izixhobo zethu kwangaphambi koko. Akukho mbuyiselo iya kunikwa wakube UKUJONGE isitshixo semveliso!
Onyuliweyo wethu squad Hacks
Thenga squad IiHacks ngaphakathi 4 amanyathelo
Khetha iQela kwiqela lemidlalo emininzi esibonelela ngayo ngabasebenzisi bethu apha kwiGamepron
Khetha amanqaku omnqweno weemfonomfono zeQela eziza kukhawulelana neemfuno zakho, sinako konke apha eGamepron
Yenza intlawulo yakho usebenzisa iprosesa ekhuselekileyo nekhuselekileyo ye-100% kwi-Gamepron!
Nje ukuba uhlawule isitshixo semveliso yakho, unokufumana ukufikelela kunye nokukhuphela iiQela zeQela
Kutheni le nto Gamepron Squad hacks?
Iqela leqela ngumdlalo othanda isibindi, yiyo loo nto abadlali beyona midlalo ibalaseleyo ngabo bebekhe badlala abatoli okwexeshana. Ukuba ungena kuhlobo okanye awuyiqondi indlela esebenza ngayo ngokupheleleyo iSikwadi, kuya kuba nzima ukuhlala ukhuphisana. Ii-hacks ezibonakaliswe ngokupheleleyo zolu hlobo akukho lula ukuzifumana, ngakumbi ukuba unomdla kwii-Squad hacks-isizathu sokuba i-Gamepron ithathwa njengomboneleli # 1 wee-hacks ezikwi-intanethi ziintlobo zethu ezahlukeneyo. Asigxininisi ekukopeni kube kanye okanye sinike unyango olukhethekileyo kuyo nayiphi na imidlalo yethu, kwaye unokuyixela loo nto ngokusebenzisa ukukhangela kweQela lethu. Ngelixa isiseko somdlali sikhula ngokukhawuleza, iQela ngumdlalo omtsha osakhiweyo ngokubhekisele kwi-buzz yawo. Nangona abanye ababoneleli ngeengqekembe bengazukuthatha ngokwabo ngokwenza i-squad hack, i-Gamepron imalunga nezinto ezintsha!
Iqela labaphuhlisi esisebenza nabo lisondelelene, lisinika ukuziva ngathi uninzi lwabanikezeli bemikhangeli abanakukwazi ukuhambisa. Xa ufuna ukwazi ukuba ubeka imali yakho kwindawo elungileyo, i-Gamepron kuphela kwenkonzo eya kwenza ngokufanelekileyo kuwe. Izixhobo zethu zenziwe ngobuchule ziingqondo ezigqamileyo kushishino lokugenca, kwaye kuvunyelwe i-Gamepron ukugcina igama esizingcayo ngalo. Iqela leqela kunye nokukhohlisa okungazukubeka umsebenzisi emngciphekweni kunyanzelekile ukuba ube nakho, kwaye nokhuseleko yeyona nto siyenzayo apha! Sukubeka ikamva kwiakhawunti yakho emngciphekweni ngokuqhatheka nge-Cheat esemgangathweni.
Ukulungisa useto lwakho kumdlalo asiseyiyo ingxaki xa ukopela nge Gamepron kuba imenyu yethu yomdlalo we-intuitive yenza uhlengahlengiso lube yinkqubo elula. Awunyanzelekanga ukuba uvale ngokupheleleyo kwisicelo ukuthoba isantya se-Squad aimbot yakho, unokuvula nje imenyu yomdlalo kwaye uyenze kwimizuzwana embalwa. Ukukwazi ukuguqula amanqaku e-Squad hack (kunye nokucima) kumdlalo kuyisibonelelo esikhulu kubadlali, njengoko unokuhlala ukhubaza ukukopela kwaye udlale umsulwa ukuba izinto zihamba kakubi.
Imida ayisiyonto xa ukhetha ukukopela ngeGamepron, kwaye sikunika zonke iimpawu ezifunekayo zokutshintsha amandla kuwo wonke umdlalo owuthathayo. Awudingi badlala phambili ukuze ufumane umva, kuba wethu Amaqhinga e-squads aya kwanela nakweyiphi na imeko.
I-Fortnite Wall Hack (i-ESP)
Ulwazi lomdlali we-Fortnite ESP (Igama, imivalo yezeMpilo, umgama)
Into ye-Fortnite ESP eneefilitha
Imowudi ye-Fortnite super jump (akukho monakalo wokuwa xa uyenzileyo).
Ithambo le-Fortnite kunye nenjongo ephambili enokuqwalaselwa.
Ukubuyiswa kwembuyekezo ye-Fortnite
yethu squad yimfumba Iimbonakalo
Umdlali weQela ESP
Sebenzisa isixhobo sethu somdlali we-Squads Player ESP ukubona apho zikhona iintshaba zakho ngalo lonke ixesha, zikuvumela ukuba uhlale kwindawo efanelekileyo.
Ulwazi lomdlali weqela le-ESP (Igama, imivalo yezeMpilo, umgama)
Sebenzisa i-squads Player Information ESP hack ukuze ufunde ngakumbi ngeethagethi zakho (njengamagama abo, impilo, kunye nomgama wabo kuwe).
Iqela le-ESP ngesihluzi
Into ye-ESP yenye into eluncedo eya kuthi ikwazise indawo yayo nayiphi na into oyikhethileyo (usebenzisa umsebenzi wokucoca ulwelo).
Ii-Aimbots zinokusetyenziselwa ukuqinisekisa ukuchaneka kwezithonga zakho, zikunike ithuba elingcono lokuphumelela imipu yakho kwiQela.
Umkhondo weqela leBullet (olusebenzayo kwimigama emifutshane naphakathi)
Landa umkhondo weebhulethi zakho ngelixa uzibandakanya emfazweni umfutshane ukuya phakathi, ekuvumela ukuba ubone ukuba ngaba ithagethi yakho ikhutshiwe.
I-squad bone kunye neenjongo eziphambili ezinokuqwalaselwa
Lungisa i-Squad aimbot yakho ngendlela othanda ngayo ngokusebenzisa ithambo lethu kwaye ujonge iinketho eziphambili ezinokulungiswa! Akunyanzelekanga ukuba ulungiselele useto lwefektri kwakhona.
Iqela le-aimbot iitshekhi ezibonakalayo
Ukutshekishwa okubonakalayo kunokusetyenziselwa ukuqinisekisa ukuba i-Squad aimbot ayitshixeli kwiintshaba ezingabonakaliyo, ekuvumela ukuba ugcine ubukho obungenatyala.
Isikhuseli sokuBuyisa umbuyekezo
Ukuphinda ususe kungasuswa kumdlalo ngokupheleleyo kunye neQela lokuFumana uMbuyekezo! Awusoze waphoswa yenye into ngenxa yokuphola ngesixhobo sethu.
Ukuba utshaba lujolise kuwe okanye lwenzeka ukusondela, ungasebenzisa inqaku lesilumkiso ukubonisa umyalezo owenzelwe wena kwiscreen sakho.
Imowudi yeqela lokutsiba okukhulu (akukho monakalo wokuwa xa uqalile ukusebenza)
Imowudi yokutsiba Super iya kuvumela abasebenzisi beMidlalo yeGron ukuthintela ukuthatha umonakalo ngexesha lokudlala iQela, ukuze ukwazi ukutsiba ukusuka kwelona nqanaba liphezulu kwaye uhambe nalo.
Ukuze ube ngoyena mdlali ubalaseleyo weQela, ungafikelela kwizixhobo ezilungileyo. I-Gamepron ibingumboneleli ohamba phambili kushishino ixesha elide, kwaye iQela lethu lokukopela lilandela lo mkhwa ngokuqaqambileyo. Kuzo zombini i-novice kunye ne-veteran yokuqhekeza abasebenzisi, ekugqibeleni ungasebenzisa ubuqhetseba beQela elingena kusilela kulindelo lwakho! Chitha imali yakho ngobulumko kwaye uthenge isitshixo semveliso kwi-squad yethu namhlanje.
IiQela eziDumileyo zeQela kunye nokukhohlisa
Iqela le-ESP kunye neWallhack
Amanye amaQela eHack kunye nokukhohlisa
IiHacks ezikwinqanaba elidumileyo azikaze zifumaneke ngokulula, kwaye yiyo loo nto yenza iGamepron ikhetheke kangaka. Uthenga kangaphi ukufikelela kukukopa, kuphela ukuqonda ukuba bekungafanelekanga? I-Gamepron ayisoze yadanisa, kwaye ayinamsebenzi ukuba ujonge umdlalo ongaphakathi! Amaqela ethu eQela afaka zonke ezona zinto zidumileyo zinokubakho, ezinje ngeQela le-ESP, iAimbot, iRadar, kunye nokuninzi kokongezwa okumangalisayo. Ufanele izixhobo ezizezona zilungileyo, kwaye nophando oluncinci, uya kubona ukuba kutheni i-Gamepron ingumboneleli # 1 wee-hacks ezikwi-Intanethi. Ukukopela kwesikwere kolu bukhulu akuhambi rhoqo, ke qiniseka ukuba awuphoswa lithuba lokukhula njengomdlali.
Ukukopa kuyathandeka kwezinye izangqa, kodwa abanye abantu baya kukuxelela ukuba kuqhelekile. Abo badlala kwi-PC banokuqaphela ukwanda kwabagculeli, kwaye ukuba awukwazi ukubabetha, ungangcono ukubajoyina!
I-Gamepron inokwenza ukuba inkqubo yokuqalisa ilula ngokukunika ukufikelela kwezona ndawo zintle zeQela ezifumaneka kwi-intanethi, ke ungakhathazeki ukuba ujonge ukukhahlela okokuqala ngqa. Sonke kwafuneka siqale kwenye indawo, nkqu nenkonzo yethu engenasiphako! I-Squad aimbot eveliswe apha kwiGamepron ixhotyiswe ngobume beempawu zobugcisa, zonke ezo zinto zazenzelwe ukukuguqula ube ngumatshini wokubulala. Ungasusa ukubuyela umva kwaye ujikeleze ukwenza ukuba ukukhaba kwakho kuchaneke ngakumbi, kwaye ukhethe ukuba leliphi icandelo lomzimba eliya kujoliswa yi-Squad aimbot yethu. Ngokuqinisekileyo eyona nto ibaluleke kakhulu kuyo nayiphi na into enokubakho kuyo iya kuba yi-aimbot, kwaye ngokuqinisekileyo khange sisike naziphi na iikona nge-Squad aimbot yethu!
Yiva amandla eSangqa se-FOV esijolise kwiintshaba njengoko zingena kuyo, unokukhetha nokulungelelanisa ubungakanani beSangqa sakho se-FOV ukuba ungathanda! Ukutshixa ekujoliswe kuko kufanelekile xa unamehlo kotshaba, kwaye awufuni ukubayeka bahambe.
Sebenzisa i-Squad hack kunye neenketho ze-ESP ngaphakathi kokuziva kwiqela lakho, kunye neendawo zotshaba. Unokumakisha indawo yabadlali beqela lakho kwaye ubone ukuba bayaphi ngokwenza i-ESP Player, unike abasebenzisi ithuba lokuba babone bobabini kunye neentshaba kwiindawo eziqinileyo. IiWallhacks ziye zaba yimfuneko kwihlabathi lokuqhekeza, kwaye iQela alinakwahluka - umdlalo unamaqela abantu abangama-50 abachasanayo, ke kusengqiqweni ukusebenzisa ubuqhetseba beQela le-ESP! Awunyanzelekanga ukuba uzinciphise kubadlali nje, nanko kukho into ye-Item ESP ebandakanyiweyo!
Ungachonga iziqhushumbisi, izixhobo kunye nezinye izinto ezibalulekileyo usebenzisa i-ESP hack yethu. Ungazami ukuvavanya ithamsanqa lakho ngezinye iindlela, njengoko oko kuya kukuthintela! Ukuqhawula kunye neyona nto ibhetele kubo kwaye bathenge ukufikelela kwi-squad yethu namhlanje.
Inqaku lethu leNyawo lisetyenziselwa ukugcina abadlali besazi xa kufikwa kwindawo yotshaba. Ungakudibanisa oku kunye nokuqhekeka kwe-ESP ukufumana umbono opheleleyo wemephu, nangona umsebenzi weFootprint uza kusebenza ngokwahlukileyo. Uza kubona iinyawo eziza kukukhokelela ngqo kwiintshaba, zikunike ithuba lokucinga ukuba uza kuyenza njani le meko. Akukho ndlela awuyi kubetha ngayo iintshaba zakho kwi-gunfight emva kokuba ufikelele kubo, njengoko uphawu oluphezulu lomonakalo luya kugxila kuphela kwiindawo ezibulalayo zomchasi wakho. Ukwenza umonakalo ongaphezulu kunabantu obonyukayo ngokuchasene nabo kuyanceda ngezizathu ezicacileyo, kuba kudutyulwe ngokudubula, ngekhe bakwazi ukuhambisana nomsebenzisi weGamepron.
Umgama yinto efanelekileyo yokwenza kule meko kuba ungasebenzisa i-Footprint ukufumana utshaba kunye noMgama ukuze ubone ukuba ukufutshane kangakanani.
Ukulandela nje iseti yeenyawo ngokungaboniyo ayilungelanga umqhekezi, yiyo loo nto uphawu lweBanga luza kukwazisa ukuba ingozi ihleli, sisiqalo nje seempawu zethu ezongezelelweyo nangona! Zininzi ezinye izinto ezibandakanyiweyo ngaphakathi kukophuka kwethu kweQela ezakwenza ukuba umdlalo ophumeleleyo ubelula kakhulu kunangaphambili, ngakumbi ukuba usaqala ukudlala iQela. Ukungena kumlo omkhulu yinto eqhelekileyo kwiQela, kodwa ukuphuma phezulu kulula kakhulu kunokwenza. Udinga amanqaku afanelekileyo ukuze ube yintshatsheli yokwenyani! Umzekelo, inqaku leStamina elingenamkhawulo lenza ukuba ukwazi ukubaleka kangangoko ufuna, ukugubungela umhlaba ongaphezulu kunabanye.
Xa ufunda indlela yokusebenza kunye nokuqhekeka kweQela esiye sakhula ngaphandle komthungo, akukho mntu eMhlabeni unokukuthintela ekuphumeleleni. Uya kunikwa kwakhona i-HWID Spoofer xa uthenga isitshixo semveliso kwi-Squad hack yethu, kwaye ungayisebenzisa ngelixa udlala kwimowudi esigcweleyo.
Iqela leqela imibuzo
Kutheni iQela lethu liHacks
Xa usebenzisa iiHacks zeFortnite ezifumaneka kwiGamepron, amathuba okuba ungavunyelwa anciphile. Imizamo yethu yokulwa ukukopela ayinakuthelekiswa nanto kwaye inokufumaneka apha!
Sigcina zonke izixhobo eziveliswe yiGamepron zihlaziywa, ngaphandle kokuthandwa. Abaphuhlisi abangabakhathalelanga malunga nokuhambelana kwezixhobo zabo abafanelwe lixesha lakho, ngakumbi xa usazi ukuba ingca iluhlaza apha eGamepron!
Kutheni iQela lethu leAimbot
I-Squad aimbot yethu inezinto ezininzi kunezinto ezininzi, kwaye loo nto iyodwa inokwanela ukuqinisekisa ukuthengwa. Uya kuhlala uzuza ngokuba nenjongo engcono kunabachasi bakho, kwaye xa usebenzisa i-Squad aimbot yethu, kuya kuhlala kunjalo! Ukuphulukana nemipu yinto yexesha elidlulileyo xa iqela lethu le-Squad aimbot lenziwe, ke joyina usapho lweGamepron kwaye uthenge isitshixo semveliso namhlanje.
Kutheni iQela lethu le-ESP
Ukophuka kwethu kweQela le-ESP kuyakubhengeza nabona bachasi bangacacanga kumdlalo, konke ekufuneka ukwenzile kukukwenza oko kwaye uya kubona yonke into. Ukusuka kubadlali ukuya kwizinto, ungasebenzisa iQela lethu le-ESP hack ukuchonga ezi zinto ukude- awunyanzelekanga ukuba uzifake engozini ukuze ubone apho ikhoyo yonke into ebaleni.
Kutheni iQela lethu leDonga lokuHamba
I-Wallhacks ayizukuveliswa ngokulinganayo, kwaye uyazi ukuba ngokuqinisekileyo wakuba uzame i-wallhack efumanekayo kwi Gamepron. Iqela lomdlalo ngumdlalo osele unamathuba anobungozi aneleyo njengoko kunjalo, kungoko unokufuna ukuwanciphisa ngokusebenzisa udonga lwethu lodonga ukubona iintshaba kwiindawo eziqinileyo (ngaphambi kokuba ungene kuloo gumbi uwedwa!). Yiba ngumdlali ongcono kunye neqela lethu lodonga!
Kutheni iQela lethu leNoRecoil
Ukuphinda usebenze ngokuxhaphakileyo kwiiseva zeQela, njengoko sisibhambuli esingokoqobo esiza kuvavanya ukuchaneka kwakho ngeendlela ezininzi kunenye. Sebenzisa inqaku lethu leNoRecoil (eyaziwa ngokuba yiRecoil Compensator) ukuyisusa kumdlalo wakho ngokupheleleyo! Kutheni uzikhathaza ngokujongana nokubuyela emva kwesoyikisi xa unokuyisusa nje emfanekisweni.
Ungazikhuphela njani ezona hacks ziphambili zeQela?
Ezona ndawo zintle zeQela ezikwi-Intanethi zingafumaneka kanye apha, njengoko iGamepron inikezelwe ukuvelisa iihacks ezifanelekileyo kangangeminyaka. Sikwazile ukulungelelanisa ukhuphelo kunye nenkqubo yokufaka nayo, sinika abasebenzisi be-novice ithuba elingcono ekusebenziseni ngempumelelo ezi zixhobo (sithembe, akunakwenzeka ukuba uyiphazamise le nto!). Khuphela ezona ndawo ziphambili zeQela namhlanje ngokuthenga isitshixo semveliso kwiGamepron!
Kutheni le nto iqela lakho leSikwati libiza kakhulu kunezinye
Amaxabiso eqela lethu le-Squad ahambelana nokukodwa kokukhohlisa kwethu, kunye nenqanaba lokhuseleko eliboniswe apha eGamepron. Awuyi kufumana ukhuseleko njengale naphi na, njengoko konke ukukhutshwa kwethu kungabonakali! Akuzange kubekho nasiphi na isiqulatho esibi esifihlwe kwizixhobo zethu nokuba, nto leyo eyenziwa ngabanikezeli abaninzi be-shady (ngombulelo, sinodumo njengoko beza apha kwiGamepron).
Unokukhetha ukuba ungathanda ukufikelela ixesha elingakanani kwi-Squad hack, konke okufuneka ukwenze kukuthenga izitshixo zakho zemveliso ngokufanelekileyo. Sinexesha elimiselweyo elinikezela iimfuno zomntu wonke, njengoko unokuthenga usuku olu-1, i-1-veki, kunye nesitshixo semveliso yenyanga enye. Khetha ukuba uza kuthabatha ixesha elingakanani nge-Gamepron, kwaye xa uphelelwe lixesha, unokuthenga esinye isitshixo!
Kuhle squad yimfumba Iimbonakalo